Kuongorora kupfupi kweGNOME 3.16 | Kubva kuLinux
** GNOME ** ndeimwe yenzvimbo dzakanakisa dzedesktop paGNU / Linux, uye nekudaro ndeimwe yevakakurumbira. Kunyangwe isiri iyo yandinofarira, ini handiregi kubvuma kuti ine zvakawanda zvakanaka zvinhu, asi zvakare zvakaipa zvinhu uye izvo zvimwe kana zvishoma ichi chinyorwa.
Pfungwa iyi haisi yekupaza paGNOME. Tinofanira kutanga kubva papfungwa yekuti zvese zvandichataura pazasi inongova yangu yekufunga uye kuti zvandinofarira hazvina kufanana neizvo zvevamwe. Tichaona zvinhu zvakanaka, uye nezvakaipa, kuyedza kusave nerusarura sezvinobvira.
Ini ndinojekesa zvakare kuti panogara paine munhu asingazivi. IYI NDIMAI Pfungwa YANGU PAMunhu
Ndanga ndichiyedza ** GNOME Shell ** zvakati wandei mumazuva mashoma apfuura, uye ndinogona kusvika pakuziva zvinhu zvaro zvakanaka nezvakaipa, zvisinei, zvakadaro hazvizadzise zvandinotarisira uye ini ndichataurawo nezvazvo muchinyorwa chino.
Sekuziva kwedu, ** GNOME 3.16 ** yakabuda nezuro ichizadza moyo yevateveri veiyi Desktop Nzvimbo netariro uye shuwa. Uye chii chiri chikonzero chese kukakavara? Zvakanaka, mumaonero evazhinji, vari kuita zvinhu nemazvo izvozvi, zvirinani vazhinji vacho.
### Izvo zvinhu zvakaipa nezveGNOME 3.16.
Ini ndinojekesa, zvakawanda zvezvinhu zvandichaenda kutaura pamusoro pezvinhu zvisina kunaka zvinogona kugadziriswa kana kushandurwa kuburikidza nekuwedzeredzwa, zvisinei, ndiri kuenda kunongedzera kuGNOME Shell sezvo yakagamuchirwa nevakagadziri, nekumisikidza uye pasina kuwedzerwa.
#### Iyo windows interface
Ini handisi interface yekugadzira, asi haufanire kunge uri nyanzvi kuti uone kuti vakomana veGNOME vakaedza kuswedera padyo nekutaridzika uye kunzwa kweOS X. Ndiani anovapa mhosva? Kwete ini, nekuti kunyangwe ichi chichava chekutanga chisina kunaka, kune rumwe rutivi icho chinhu chandinoda.
Zvandiri kutaura zvinogona kunge zvichipesana, saka ndichaedza kuzvitsanangura zvirinani. Kuonekwa kwekushandisa uye iyo Desktop Nharaunda mune zvese ini ndinoda, nekuti iri chaizvo padyo padyo nemhando yeOS X.
GNOME Hausati uri iwe woga waiyedza kutevedzera * kana * kuteedzera * iyo Apple * OS. Iine imwecheteyo kopi uzivi isu tine Kubatana, chinhu chete chisipo kuisa Dock kuruboshwe pazasi, chimwe chinhu chinogovana iyo GNOME Shell dhizaini, uye mune ese ari maviri mamiriro nekutadza, havakwanise kutamiswa kubva panzvimbo .
Asi zvakanaka, kana chinangwa chiri kuunza vashandisi veGNU / Linux chimwe chinhu chine ** more style **, ivo vakabudirira, zvakadaro, kuteedzera dzimwe nguva kune zvayakaipira. Sezvo isu tese tichiziva, GNOME izvozvi * inobatanidza iyo bha yemusoro uye mabhatani ewindo nemidziyo yezvinhu *, muchokwadi OS X maitiro, mune chimwe chinhu chavanodaidza kuti CSD. Ok, uye chii chakaipa icho ichi chinounza?
Kutaridzika vashoma chete, asi nehunyanzvi kana chishandiso chikafa, hwindo rinofa uye nekudaro tinorasikirwa naro. Hatigone kuivhara, kurerutsa, kana chero chinhu chakadai. Uye izvi zvinomiririra dambudziko kuve poindi isina kunaka here? Zvinogona kudaro, ndingati, sezvo mhinduro kune izvi zvichatsamira pane zvatiri kuita panguva iyo hwindo rakarembera .. * (Chenjera nevaya vanoona pr0n zvinyararire ehh) * ..
#### Iyo nyowani system tray
Chimwe chinhu chisingadiwe nevashandisi vazhinji ndechekuti GNOME haibvumidze kuisa zvinoshandiswa mukona yekumusoro kurudyi kwechiratidziro, ndiko kuti, munzvimbo yepaneru panotarisirwa tray system, asi vasvika mune iyi vhezheni 3.16 na mhinduro: diki diki pazasi kuruboshwe * iro rinoratidzika richisvetuka * chete kana paine zvinoshandiswa zvinoshandisa iyo system tray, uye kuti isu tinogona kuviga kana kuratidza.
Parizvino zano harina kushata, nei kuzadza iyo yepamusoro pani nemifananidzo? Nekudaro pane zvinhu zvakati wandei zvandisingade kana izvo zvandinoona sebug.
Iyo iri pazasi kuruboshwe, kana isu tachinjika kuti iyo system tray iri kurudyi kurudyi, hazvina basa kana iri kumusoro kana pasi, asi kurudyi. Izvi zvinogona kusagadzikana kune vamwe (ini ndakabatanidza).
Kana tikazviviga uye chishandiso chakadzikiswa hachienderane ne * new ziviso system * isu hapana chatichawana. Kune vamwe zvinogona kunge zvakanaka, kwandiri zvakaipisisa, nekuti kunyorera kwandinounza ku * tray * ndizvo chaizvo izvo zvinofanirwa kunge zviripo kuti zvindizivise uye kuve munzvimbo inoonekwa.
#### Isu hatisati tine bhaa rebasa.
Kana isu tichida kuchinja hwindo kana kungoona kuti tavhura, chii chatinofanira kuita? Nokusingaperi, GNOME haisanganisi iwo MaMaxize / Minimize mabhatani mumahwindo, nekuti vagadziri vayo vanogona kufunga kuti tinoda kuvhura windows ese, rimwe riri pasi peimwe kana pamatafura akapatsanurwa.
Nekudaro kuti uone iyo yakavhurika kunyorera isu tine matatu sarudzo sekuziva kwangu:
+ Enda nechikara chegunduru kuruboshwe rwekumusoro kuratidza * dashboard *.
+ Ita zvakafanana asi uchidhinda kiyi yacho Super L (iyo ine mureza weWindows).
+ Kana chinja pakati pezvishandiso uchishandisa alt + Tab.
Kana iwe ukawana chero eaya matatu matatu anoshanda kana akasununguka sarudzo ok, asi kwandiri zvinoita kunge zvisingawanikwe kana kushandisika zvachose.
#### Chinyararire Notifications
Imwe yemabudiro makuru eiyi vhezheni 3.16 ndeaya ziviso izvo zvino zvoenda kumusoro pamwe neiwachi. Ini ndichataura nezve izvi gare gare, ikozvino ndiri kuenda kunongedzera kune kuziviswa kwezvimwe zviito izvo muGNOME 3.14 zvakashanda uye izvozvi havadaro.
Muenzaniso wavo ndewatinobatanidza mudziyo wekunze, semuenzaniso ndangariro ye USB. Chii chinoitika, pane mumwe munhu akaziva kuti takabaya chiteshi che USB? HERE, kana tikasatarisa pane diki denderedzwa rinoonekwa padhuze neiyo wachi, hatizowana
Kwete kunyangwe mukufarirwa kwezaziso ini ndinoona sarudzo iyo inonditendera kuti ndiwedzere zvishandiso zvinobviswa sechikamu cheye ziviso (regerera iyo redundancy). Uye ikozvino, kana mumwe munhu ane moyo munyoro, ungandiudza here kudzikisira chishandiso chinobviswa kamwe chakakwidzwa pasina kufanira kuvhura ** Nautilus **? Iko hakuna sarudzo kune chero kupi.
#### Mapurogiramu asina sarudzo
Ndokumbirawo, chero munhu anouya neyakare hurukuro yausingade kuita chero chinhu asi kungotarisa, kuteedzera mafirimu, uye kuronga zvinyorwa, uye iko nyore kweGNOME kunoita kuti iwe uite izvozvo, unogona kuzviponesa nhamo yekutaipa yako chirevo. Uye ini ndinozvitaura kubva mukuremekedza, kuti nhoroondo inopfuura yekare.
[quote] Vazhinji vanotsoropodza KDE nekuti ine sarudzo dzakawandisa, uye ndinoshamisika kuti ndeipi iri nani?
Izvi ndizvo chaizvo zvinoitika kwandiri neGNOME uye nekushandisa kwayo. Nautilus Murombo anoita zvishoma mazuva ese, munguva pfupi anozove nesarudzo shoma pane Thunar y PCManFM, kana isati yasvika ipapo. Semuenzaniso, edza kutumidza mazita akati wandei panguva imwe chete. Kana kunditendera kuti ndione saizi yefaira ndisina kuenda kune zvimiro zvefaira kana kurisarudza, kungoisa akati wandei mienzaniso. gedit Icho chimwe chiri chakarurama, asi hei, zvakati wandei izvo zvine kuratidza kwemavara kune akasiyana mitauro.
Iyo nyowani yakanaka kwazvo yeGNOME kalendari, mune yakasarudzika maitiro e Maya karenda ya Elementary OS, asi kugadzirisa zviitiko zvedu zvichipesana nezvazvinoratidzika (zvinofanirwa kuve zvakapusa), kunogona kutema musoro. Ini ndinokukoka iwe kuti uedze, gadzira chiitiko chanhasi, uye chiitiko chimwe chete icho chiedze kuchipfuudza chamangwana, nekungozvuva. Ivo havagone, ivo vanofanirwa kugadzira imwe nyowani, voisa zvakafanana neiyo yekare uye vodzima yekare.
Uye ini ndaigona kuenderera mberi, asi kupedzisa chikamu ichi isu tine iyo * GNOME Control Center **, iyo isingori yakapusa mune dzimwe nguva, asi kuti tisvike kune dzimwe sarudzo tinofanirwa kubaya kupfuura muWindows.
#### Tinofanirwa here kutaura nezvesarudzo dzekugadzirisa?
Pasina * Gnome Tweak Zvishandiso * izvo zvekumisikidza pamusoro hazvibatanidzwe nekutadza, isu tichava nebasa rakaomarara ne * DConf / Gconf-Mupepeti * pamberi pekuchinja, semuenzaniso, iyo font font. Iyo poindi yandichagara ndichitsoropodza muGNOME nyowani.
#### Mamwe mashoko
Iyo yekushandisa kana yekuraira launcher ( Alt + F2 ) haina auto-yekupedzisa, saka isu tinofanirwa kuziva iro chairo zita rekushandisa ratiri kuda kuvhura.
### Izvo zvakanaka zvinhu nezveGNOME 3.16
Asi kwete zvese zvakaipa, zvinofanirwa kutaurwa. Ini ndinodzokorora kuti chimwe chezvinhu zvinonyanya kufadza nezveGNOME Shell 3.16 ndizvo chaizvo interface yayo uye kuti yakapusa sei kuita. Pakati pese, uye zvakapararira kutaura, ino yakanaka Desktop Nharaunda mukati mezvinokwana uye inosanganisira zvimwe zvinhu zvisinganyanyo kufadza.
#### Mabhokisi kana maGNOME Mabhokisi
Mberi-kumagumo kweQemu-kvm iyo isingakodzeri chero chinhu kunze kwekurumbidza. Chinhu chakakura kufunga kuti hapana munhu akambofunga kushandisa chishandiso chakareruka kuita virtualize kare. Mune iyi vhezheni iri nyore kushandisa uye kunakidza.
#### Interactive Notices
Chinhu chandaigara ndichifarira nezveGNOME Shell, iro simba remuenzaniso kupindura kune yakavanzika meseji nejabber kubva kuziviso yacho pachayo.
Aya matsva ekuzivisa haana kushata, asi kusakwanisa kusarudza atinoda kusiya kana kuvhara kunoita kuti ndisanetseke, vamwe vanotonyangarika isu tisingadi, kana ivo vanoramba vakanamatira uye vasingakwanise kubviswa (kunyanya neEmpathy, inotevera kuva nembugs), asi iwe wakakanganwirwa. Iwo anotonhorera chaizvo uye ari munzvimbo yakanaka, achitora nzvimbo yaimboshandiswa.
Kunyangwe iri kopi yeWindows kana kwete, iyo GDM yekukiya skrini yakanaka, uye kunyanya kana isu tine zviziviso uye tichivaona vasina kuwana iyo desktop, kunyange muchidimbu izvi zvinogona kumiririra dambudziko rakakomba kune zvakavanzika zvevashandisi.
#### Screencast iripedyo
Imwe sarudzo yandakagara ndichida nezveGNOME Shell iri kugona kurekodha desktop yedu nekubatana kwemakiyi. alt + Ctrl + kusuduruka + R.
Pasina ivo ndinopokana zvakanyanya kuti chero munhu anogona kurarama anopfuura vhiki muGNOME Shell, hazvo, kunze kwekunge ivo vasiri kunyanyo kuda. Icho chete chinokanganisa ndechekuti izvozvi mazhinji eaya anoshanda muGNOME 3.14 atove akaremara muGNOME 3.16. Asi pasina kupokana ivo chimwe chinhu chakanaka chatinofanira kutaura.
### Mhedziso paGNOME 3.16
Kune avo vanoda kuve nyore uye nyore, ivo pasina mubvunzo vanowana yakakodzera Desktop Nzvimbo muGNOME. Zvishandiso senge nyowani IRC mutengi, mamamepu, khalendari, kubva kune kwavo kusimba vanoziva yakanaka, yakachena.
Ini ndinoda akawanda maficha senge mamiriro ekunze, ayo akanyatsoitwa. Nekudaro, pakupera kwezuva iwe unoona kuti une zvakakwana zvekugona kushanda uye haugone kusvina zvakakwana Desktop.
Kune vamwe vandisingakwanise kuyedza seMumhanzi, nekuti ivo vakandipa kukanganisa kana ndichiedza kuvaburitsa nePython kana chimwe chinhu chakadai, uye Kunzwira tsitsi, ini handimbogona kuvhura hwindo rehurukuro neshamwari. Ini ndinofunga kune zvekare zvimwe zvisingaenderane maererano nedesheni (iyo iri pachena yakanangana nemahwendefa), nekuti nepo isu tichiwana mabhii mahombe mumahwindo, mipumburu yemipumburu yakatetepa kwazvo.
Asi kazhinji kutaura, nekuburitswa kwega kwega GNOME iri kuramba ichinyanya kutarisisa zvinangwa zvayo uye ichipa chakabudirira chigadzirwa. Zvekuti handizvifarire, kuti handizviwani zvichibudirira, ingori kutenda kwangu, ndinoziva kuti vashandisi vazhinji vanonzwa kugadzikana. Panogona kunge paine zvimwe zvakanaka zvandisati ndashandisa kana zvandisingazive, ndichavaona nezuva nezuva, chero zvakadaro ini ndinonzwa mazano uye maitiro mune zvakataurwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Applications » Ongororo pfupi yeGNOME 3.16
Maonero akataurwa mune ino blog ndeye chete iro basa remunhu ari kuvaburitsa uye hazvireve kuti anomiririra kufunga kwe desdelimux.net
maonero angu ndeekuti gnome inoitwa nevakagadzira graphic vachisiya parutivi komputa
Zvinoita sezvakanaka kwandiri kuti gnome haina bharaki rebasa, iri super vakano kutakura muromo wegonzo uye kuona mawindo angu munguva chaiyo.
Pindura kuna lfelipe
Isu tinogona zvakare kuzviita mu KDE, semuenzaniso, uye ini ndichine bharaki rebasa 😉
Pfungwa yangu ndeyekuti ndinoda GNOME, ndakaedza zvese zvinonaka zvegobolondo uye hapana anotora kuravira nekuyemura chirongwa chakadai.
Zviri pachena kuti hazvina kuitirwa isu isu vanobata akati wandei zvinyorwa zvinyorwa panguva imwe chete. Ndiri kureva, hunhu hunotsanangurwa neGNOME zvakasarudzika haunyatsobata kubata magwaro mazhinji kamwechete.
Ini ndinonzwa senge muchadenga ari murembere achitsvaga yake spacehip kana ndikasaona bharaki rebasa.
Gnome yakanaka, ini ndagara ndichiifarira, asi pfungwa yekuita chimwe chinhu zvakanyanya uye zvishoma minimalist nguva dzese, dzimwe nguva inoita kunge isina musoro kwandiri, ndinotarisira kuti haizopedzisi seOperaCoast (inofamba zvichibva pamaoko nemaoko)
Kana kuti ndeyekuti OSX Yosemite akateedzera TODOOOOOO kubva kuGnome ??? !!! ^ _ ^
Inogona zvakare kuva hehehe.
Iwe uri chokwadi chaizvo hwindo raive kopi ye osx kune gnome uye kwete imwe nzira yakatenderedza, kana zvisiri kutarisa mazuva ekuburitswa
Ini handibvumirane nedzimwe pfungwa seyakajairwa Gnome Shell mushandisi, asi ivo vanokudzwa. Mune mawonero angu, ndinotenda kuti huzivi hwe desktop ino ndeyokupa izvo zvakakosha uye zvakafanira kuti ugone kushanda, uye kana iwe uchida kuwedzera, unogona kunyatsogadzikana nezvakawedzerwa (izvo zvinogona kuiswa zvakananga nekudzvanya kubva kune inoenderana peji).
Sechinhu chekucherechedzwa, Karenda chirongwa chitsva chiri muchikamu chekuyedza, mhando yekutarisa, uye ichaburitswa zvine mutsindo mushanduro 3.18 yeShell. Ivo zvakare vakawedzera imwe yeEbook.
Ongororo yakanaka uye chinyorwa chakanaka, chengeta icho kumusoro. 😉
Ndatenda nekutaura Chuck Daniels. Muchokwadi, ndinobvumirana neizvo iwe zvaunofunga, uyezve, iwe une kodzero yese yekuve neyako pfungwa. Wese mushandisi akasiyana, uye zvinodiwa zvinosiyana. Zvichida ini ndatochinjika kune zvimwe zvinhu izvo GNOME isingandipe.
Ini ndinobvuma, kunyange pfungwa yekushanda ichizosiyana kubva kune imwe ichienda kune imwe. Segweta ini ndinofanirwa kuve nemagwaro akavhurwa panguva imwechete uye nyore kufamba nawo. Kunyangwe iyo Kubatana system inoita kuti ndisanzwisisike mune idzi kesi. Kunyanya zvakadaro kana ndichifanirwa kuenda kuActivities kana kusanganisa makiyi; kana kana ini ndichifanira kudzikamisa windows. Ehezve, iyi ndiyo pfungwa iyo GNOME inopa kunze kwebhokisi.
Chinhu pamusoro pekuwedzeredzwa chakanakisa asi ... rave nedambudziko rekusawirirana kwemaraibhurari nemaAPI rakagadziriswa?
Hongu, asi vanhu veGnome shell havabatanidzi zvinhu zvakawanda zvakajairika uye kune zvimwe izvo zvinongoshaya sarudzo asi zvisina kujeka, zvinhu zvakakosha sekushandura Wallpaper kana chitarisiko. GNOME Tweak Chishandiso chinhu chisina basa nekuti zvimiro zvacho zvinofanirwa kunge zviine gnome control Center. Uye icho chimwe chinhu ndechekuti gnome control Center yakaganhurirwa pane zvakafanira. Uye zvimwe zvakawanda zvinhu izvo mushandisi asingatonge. Gnome shell paFedora inotanga kubva ku600 megabytes kusvika 1gb yegondohwe pamushini we4gig uye hapana nzira yekugadzirisa izvi. Iyo desktop iyo yanga iri mubeta kwemakore akati wandei ikozvino, isina kunyangwe yakasanganiswa gnome-screen-saver kana gnome-chikamu-propities kana zvimwe zvakawanda sarudzo dzakaita semabheta.
Warevesa; Vanogadzira Gnome vanokupa iwe nharaunda yakakosha nemukana wekuiwedzera nemabasa, ayo anoita kuti iwedzere kushanda. Kunyangwe ivo vasingatarise pakupa nzvimbo yakajeka yakajeka yesarudzo. Nekuti ipapo zvaisazove zviri minimalist. Asi izvo hazvitorere mukana wekutaridzika wakanaka uye wazvino. Nokusingaperi zvinofadza ziso uye zvinogona kuvandudzwa nemhando dzakasiyana dzeGTK neShell, izvo zvisiri zvishoma.
Zvichida tsika yacho inoita basa rakakosha mukusarudza desktop desktop. Sezvo ini ndine PC ini ndinoshandisa Linux uye ini handina kushandisa Windows kana Mac kwenguva yakareba.
Zvagara zvichitaurwa kuti kuenzanisa kune ruvengo. Uye uyu unogona kuve muenzaniso. Kde inogona kunge ichinyanya kushanda, asi inorema uye Gnome-Shell, yakareruka uye nekukurumidza. Nesimba ravo uye kusasimba, madhesiki ese ari maviri anoshanda, mumaonero angu ekuzvininipisa.
Iwe wakatozvitaura pakutanga ndiwo maonero ako wega.
Ini handidi kupinda mukuenzanisa, asi kutaura izvozvi kuti KDE inorema kupfuura GNOME, kana kuti inononoka, inogona kunge iri nhema yekukura kweZuva. Kunyangwe hazvo zvirizvo, isu tinofanirwa kuona izvo zvaunodana "zvinorema" mune ino kesi.
Handina kumbotaura kuti GNOME yakanga isiri yechokwadi, ini ndakati (nemamwe mazwi) hazvindigadzirise, kuti hazvina kufanana. GNOME inzvimbo yakanaka yeDesktop, asi haisi yangu.
Ini ndatoti, KDE neKonqueror pa1.2 GB.
Gnome ine Firefox hafu.
Sokutaura kwakaita Diazepan: "Zvese zviri zviviri zvinorema uye zvakakwana zvakakwana."
Pindura kuna Od_air
Mu KDE neFedora ini ndakatanga huwandu hunosvika mazana masere neine homerun Launcher iyo yaingodya nezve800mb uye mune imwechete distro asi neine gnome shell kana sinamoni iyo desktop yaizonditangira kana kana ingangoita 250mb ingangoita 1200mb isina mukana wekudzikisa zviwanikwa zve nharaunda. Ndine 900-core CPU uye 4gb Nvidia mifananidzo uye 1 RAM, handifunge kuti inokodzera kuita kwakashata neizvi zviwanikwa mu gnomeshell kana muCinnamon.
kuitira kuti windows "Ita zvakafanana asi uchimanikidza Super L kiyi (iyo iine mureza weWindows) kuoneka." Izvo zvinoita sezvakanaka kwandiri, nekuti ini ndine zvese nekiyi Win, uye zvese kubudikidza nekhibhodi uye ini handidi kuenda chero kune mbeva. Mushure meKiyi Kukunda ini ndinoona windows angu munguva chaiyo, uyezve kana ndichida kuvhura chimwe chinhu ini ndinongonyora zvishoma uye ndizvozvo… ini ndinozvida zvakanyanya.
Ehe, ndinofarira kudzikisira uye nezvimwe…. (iyo yandinoshandura nematurusi ekugadzirisa)
"Iwe haugone kusvina desktop kuzasi" ... chingave chii kusvina zasi kwedesktop? Kwaziso nekutenda!
Gnome yakawedzera uye yakawedzera kunaka asi ichienderera kure neyechinyakare desktop pc yakatemerwa chaizvo yekubata skrini ine zvimwe zvinongedzo zvinobatsira asi zvangosiiwa.
Ini ndinoda sinamoni kunyangwe zvese zviri zviviri zvakaipa pc yangu .-.
ndosaka ndichigara ne kde
Batisisa KDE yekare, hapana chimwe chinhu chine basa ... hahahaha
Sinamoni yakakwenenzverwa zvakanyanya munguva dzichangopfuura, iri desktop inoshanda, kunyanya kupfuura Gnome pachayo, kunyangwe masvondo mashoma apfuura ndakaisa Mint kune mukoma uye chokwadi ndechekuti ndakaiwana "inorema" ... Pakupedzisira akapedza ne KDE, zviri pachena kuti Aitenda kwazvo achibva kuWindows ... zvakashata zvekuti mushure memazuva mashanu iyo desktop yakanga isingazivikanwe kubva kune yakawanda mawoko, tisingatauri iwo mavara aakasarudza kugadzirisa: facepalm: yezvinodiwa, mavara.
gnome kana kde…. openbox mitemo bitches 😛
Ini ndaigara ndichisarudza imwe wm, kwete nekuti pc yangu iri violet kana haina simba rakanyanya, ndinogona kumhanya kde pasina matambudziko asi ini ndoda kureruka, ndine menyu yekuvhura mashandisiro, iyo nguva, system tray, uye taskbar ini ndakwana , mune chero mamiriro ezvinhu, kana ini ndichida desktop ini ndinoshandira ku xfce
Kwandiri, hipster uye minimalist makomputa ane makadhi akaremberedzwa ...
Ivo vanhu vanoshandisa Gnome, KDE, WM, vari sooooo mainstream ...
Kungoverenga chinyorwa ichi kunenge kuchindisiira chishuwo chekufungidzira kuti ndingangove nerimwe zuva rekuyedza chikara chakadai. Pandinoda kuona chimwe chinhu chinoyevedza pane kutanga Debian ini ndinotanga yangu Windows Vista neAero uye ese chirimbolos uye ndinodzokorodza maonero. Uye kana ini ndichida kuita zvimwe zvese, saka Debian ine Mate Desktop. Iko shanduko yeshanduko yacho pachayo, pasina zvinangwa zvakajeka, pasina chero chinodiwa, pasina kugadzirisa chero dambudziko uye pachinzvimbo kuunza akasiyana misoro, nei ... Dai iwo madhiraivhu aive kurudyi, chii chingapihwe nekuchichinjira kune rimwe divi? Sei uchisiya izvo zvinoshanda? Tora muenzaniso weWindows 8 uye yayo Metro kana Yemazuva ano interface ... haina mukurumbira, haina kukodzera kushanda muhofisi uye ivo vaifanira kumhanyira kudzokera kumenyu yekutanga yehupenyu hwese. Ini ndichaenderera mberi neDebian yangu neMate Desktop, yakafanana nechitarisiko asi zvirinani kupfuura yekare Gnome. Zvese zvinoenda kwazvinofanira kuenda, zvese zvinoshanda, unogona kushanda. "Kana zvichishanda, usazvigadzirisa"
Pindura kune ufn
Hahaha kwete, mabhatani ewindo ari kurudyi semazuva ese. Ini ndinofungidzira elav akavashandura kuruboshwe nechimwe chikonzero.
Ini ndinobvumirana chinenge mune zvese newe. Hazvirambike kuti idesktop rakanakisa uye kumwe kunyorera kunoratidzika kunge kunoshamisa, senge mamiriro ekunze nemamepu, asi haina kunyatsoshanda kushanda. Hapana chinhu chinoshanda chandinofanira kutaura. Nei vachimanikidza kuita kuti mushandisi ashandise sisitimu sezvavanofunga kuti inofanira kushanda? Chero imwe DE inotipa mukana wekuchinjisa kune zvatinoda nezvatinoda. Mune yangu nyaya KDE yangu yakasiyana zvachose nenzira yainouya nayo kubva kufekitori nekuti ini ndinochinjisa kune zvandinoda.
"GNOME ndeimwe yenzvimbo dzakanakisa dzedesktop paGNU / Linux, uye nekudaro ndeimwe yeanonyanya kufarirwa. Kunyangwe isiri imwe yezvangu zvandinoda »isu takatanga kutumira zvakashata, Gnome haisi imwe yeakanakisa, ingori imwe yeanonyanya kufarirwa. Dhesiki rakanakisa ndere iro rinosarudzwa neese ega, iro rinozivikanwa zvakanyanya harifananidzwe neiri nani.
Kana zvirinani kana zvichizivikanwa chete chikamu chekuonga cheumwe neumwe, kwete nekuda kweichi chikonzero positi inotanga zvakaipa. Nekudaro, kana zviri kwandiri chimwe cheZvakanakisa, kutaura zvazviri, kwandiri kune chete ZVIMBIRI ZVAKANAKA, KDE neGNOME, vamwe vanongoshandisa zvinoshandiswa kubva kune izvi zviviri.
Kana ini ndisina kukanganisa iyo Gnome Shell Client Side Kushongedza kwakasvika gore pamberi peOSX maCDE. Saka yaive OSX iyo yakafuridzirwa neGnome Shell, kwete imwe nzira yakatenderedza. Tsvaga zvirinani ...
Que? Pamwe izwi rekuti CDE rakauya rekutanga muGNOME, asi muOS X yanga iri nguva, asi nguva refu yapfuura, iro zita rebha rine turu yekubatanidza. Zvisinei, kana iwe uine chero sosi kwaunogona kupokana nezvako chirevo, ndapota usatumira.
Handizive kana zvakakodzera:
Iko kune chinongedzo kuchinyorwa kubva ku2011 umo zvinoonekwa kuti shanduko iyi yakarongwa kubvira gore iro.
Ini ndanga ndichitarisa uye zviri pachena kuti ndinokoshesa chiitiko ichi muOS X Yosemite, vhezheni yapfuura yeiyi OS ndiMaverick uye sezvo ini ndaigona kuona ipapo vanga vasati vaitwa. Sezvo OS X yakabuda muna 2014, kana kwete? Uye Gnnome Shell 3.10 yakabuda muna 2013, mune iyo vhezheni CSD yakaunzwa. Saka kana ndisina kukanganisa, Gnome yakauya nayo kutanga uye OS X yakazoshandisa gare gare. Ehezve ini ndakangotsvaga blog chinyorwa mazuva nemifananidzo kuti nditaure izvi, ini handizive zvizere nhoroondo yevaviri. Ndingangodaro ndakanganisa, kana zvirizvo, ndiruramise.
Nenzira iyo elav, iri CSD kwete CDE (Client Side Kushongedza zvinoenderana neyekuvandudza.js)
Ngatione, vanogona kunge vakateedzera dhizaini yeEpiphany sekutaura kunoita MuyLinux chinyorwa, pamwe kwete, zvisinei, kuve neIki / Kuvhara / Kuwedzeredza mabhatani padanho repabhairi chinhu icho kana ini ndisina kukanganisa anga aripo kwenguva yakareba pane OS X (kunyange asiri ese maapplication). Zvisineyi, hazvina basa kana GNOME yakachiunza muna 2011, chakauya kuzochiita muna2014 / 2015 .. saka yekutanga kurova, kurova kaviri .. dos
Ini ndato gadzirisa CSD, ini ndinogara ndakanganisa uye ndinoisa CDE, iyo yandinayo kubva pano, nekudaro kukanganiswa.
Gweta raDhiyabhorosi akadaro
Ini ndinofunga iyo pfungwa inosimudzira iyi tafura yakavhiringidzika. KDE ichave nesarudzo dzakawanda, asi nei tichiida kuti vese vaiswe uye vatore nzvimbo yediski, pamwe nemaraibhurari avo ese akabatana, kana tichingoshandisa makumi maviri muzana avo?
Gnome yakanyanya kushomeka, zvekuti tinogona kupotsa akawanda ekushandisa. Asi ndizvo chaizvo izvo zvinowedzerwa ndezvekuti uwane desktop kune iko kushandiswa kwatinoda kuipa.
Zvinotaridza kwandiri kuti nzira yeGNOME inoita zvine musoro, chinhu chega chinoitika ndechekuti inoitwa zvisirizvo, nekuti neshanduro yega yega nyowani yekuwedzeredza yekare haichashandi.
Dai iri dambudziko rekuenderana rakagadziriswa, iwe ungadai wakaisa chero chinobatsira munzira yaunoshanda, izvo zvinoguma nekuve nerakareruka uye zvechokwadi modular tafura, yakagadziridzwa mukushandisa iwe kwauchazopa iyo, uye kwete huwandu hwesadza risingabatsiri. iyo KDE inayo uye kuti unofanirwa kumedza nayo kunyangwe iwe uchiishandisa kana kwete.
Pindura kuMumiriri waDhiyabhorosi
Hongu, asi sezvo iri yemahara software uye chikamu chimwe nechimwe chinoitwa naani uye pavanenge vachida, nzira yeKDE iri nani chaizvo nekuti kana zvese zvikaenda nesystem, pavanenge vachiiburitsa unoita shuwa kuti vaedza zvese kana zvakanyanya. Ndichiri naGnome, pavanosunungura mubeta kuti vawane mabugs, sevanoyedza vasingashandisi akawanda ekuwedzera uye vasingaione zvakajeka mumamenyu, ivo vanosara vasina kana kushanda mushanduro nyowani.
Mhoro John. Chaizvoizvo, iyo system inoshandisa kuwedzeredza idambudziko, asi izvo hazvireve kuti iyi pfungwa ye modularity, yekuwedzera iyo desktop neyakawedzera yakaipa.
Zvinoita kunge zvirinani kwandiri kupfuura KDE, iri pamwe chete, kunyangwe iwe uchiishandisa kana kwete. Ini ndinopa muenzaniso ... Baloo, vanhu vazhinji havadi kuishandisa nekuti inoshandisa zviwanikwa zvakawanda kana nekuti vanofunga kuti inokanganisa kuvanzika kwavo.
Hazvingave zvirinani here kuva nesarudzo yekumisikidza kana kuiburitsa nekamwe chete, sekuwedzera?
Ini handifunge kuti dambudziko nekuwedzeredzwa rine chekuita nekuti iri yemahara software, ndinofunga imhaka yekuronga zvakashata kana kusakwanisa kuenda kwairi nemazvo.
Asati aburitsa vhezheni nyowani, ndiGnome anofanirwa kuchinjisa akawedzeredzwa ekare kuti ashande nemazvo, ivo vari papeji yepamutemo yechimwe chinhu, ndinofungidzira kuti kana vasingadaro imhaka yekushomeka kwezviwanikwa.
Zvandaida kuratidzira mune zvakataurwa ndezvekuti KDE neGnome ipfungwa mbiri dzakasiyana dze desktop, saka zvinoita kwandiri kuti kuenzanisa hakuchina nzvimbo.
Zvakafanana nekuenzanisa lxde ne kde, iwo maviri anopokana mazano ayo anotsvaga akasiyana zvinangwa. Ini handioni poindi yekuti, kde ine basa iri uye gnome haina, zvakanaka, ehe, haina, saka chii? ndezvekuti iwe zvinobatsira iwe handishandise zvachose, saka ...
Baloo inogona kumisikidzwa nemuchina weKutarisaButton 😉
Ichokwadi, KDE nezvose izvo dhisiki nzvimbo ... sezvo izvozvi madhiraivhi akaoma anouya akasimba kwazvo!
Gnome yekuwedzeredza inyonganiso, nekuti sezvo uchivimba neicho chisingagadzirise kubva pane imwe vhezheni kuenda kune imwe, iwe unofanirwa kumirira kana kupeta maoko ako uye kudzidza maitiro ekuti iite ...
Pindura kune fistro
Mhoro Fistro, hausi mubvunzo wenzvimbo yauinayo pane dhisiki, iri mubvunzo wekugara nayo nezvaunoshandisa kana kuda kushandisa. Semuenzaniso, munzvimbo iyoyo inogarwa nesarudzo dzekde dzandisingazomboshandisa, ndinosarudza kuve neiyo starwars trilogy, ishe wemhete, hobbit uye matrix semuenzaniso. Sezvauri kuona, inyaya yekuda hapana chimwe.
Nezve izvo zvekuwedzera, ndinobvumirana zvachose newe.
Kutanga ndinokukorokotedza iwe pachinyorwa, zvese zvine chekuita neGnome zvinondinakidza. Ini parizvino ndine Ubuntu Gnome 14.04 yakaiswa neGnome 3.10.4 nharaunda. Mubvunzo wangu ndewekuti kana ini ndikagadzirisa iyo Gnome vhezheni ndinorasikirwa neyakagadzikana kana kuzivikanwa kwemakiyi ekushanda ebhuku rangu ...
Ini ndinogara neGNOME yehupenyu….
Kwakanaka iwe 😉 http://goo.gl/2DwEhQ
elav sei akanaka iwo plasma theme yewako skrini. Ungandiudza zita racho here? Kwaziso 😀
NdeAIR, asi zviratidzo zvetereyi zvinobva pane yePlasma theme inonzi KDE5.
Chekutanga : http://sia1.subirimagenes.net/img/2015/07/24/150724092649508569.png
yechipiri iyo yePlasma (kde) mushandisi inotaura nezveGNOME zvinoita sekunge iwe unoisa rusaruro pamberi pemunhu mutema ...,
chechitatu: Ini ndinofunga GNOME seFirefox bhurawuza rakazara mauri kuwedzera mawedzero ekuvandudza mashandisirwo ayo uye kuita kuti ive yemunhu, chaizvo seGNOME kana iwe unogona kufungidzira firefox inosanganisira zvese zvinowedzerwa zvakafanana neizvo Plasma (kde )? , Ini ndinoenda kune yekutanga sarudzo ..
chechina: sisitimu iyo dzimwe nguva inokudya iwe kunyange 1g yegondohwe uye mune yayo yazvino vhezheni izere ne bug, ini handifunge kuti inofanira kunzi yakanakisa ...
Ini handizive kuti chirevo ichi chiri chei, zvisinei ndinokupindura:
Chechipiri: NeGNOME kana chero nharaunda desktop ndagara ndisingasaruri. Ndinoziva maitiro ekuziva chakanaka nechakaipa mune yega yega.
Yetatu: Kufananidza hakushande mune ino kesi, nekuti hazvisi zvekuti Firefox ine akawanda akaiswa akaisirwa, ndeyekuti Firefox inogona kugadziridzwa kusvika pakuisa iyo URL bar pazasi, mabhatani ekufambisa kune kurudyi, iwo matabhu kuruboshwe, ayo ekuwedzeredza aisazoshandiswa, asi chingave chinhu chinozvarwa kuchishandiswa.
Chechina: Ndinofunga unoreva KDE 5. Zvakanaka, izvozvi ndine GNOME Shell yakaiswa pakombuta yangu yebasa (ine 8GB ye RAM), uye KDE 4 paLaptop yangu (ine 6GB ye RAM), uye mashandiro eKDE zviri nani kwazvo, sekushandisa pamwe nemaapplication akafanana akavhurika, iti: Chromium, Keepassx, Dolphin / Nautilus, Synergy, Konsole / Gnome Terminal ..
Zvine musoro kuti KDE 5 ichiri nemabhugi ayo, iko kusimudzira kutsva, asi haina GNOME here?
Muchidimbu Chando, gakava risingabatsiri izvo zvauri kuedza kutanga.
Zvekutenda nekutenda nekupindura.
1 - Kuti mushandisi we KDE ataure kuti haadi Gnome, zvakaita sejongwe rinotsamwa uye kupopotera dhadha nekusaimba mangwanani.
2 - Ndinonzwa kusanzwisisika pandinoverenga zvinyorwa izvi umo vanoti Gnome haishande isina kuwedzeredzwa uye ini ndinoona kuti ndinoishandisa pasina kuwedzererwa uye ndinenge ndisina madingindira. XD
Neniwo ndinobvumirana nazvo. Vanhu havazive mashandiro ematafura, uye kutaura kuti nharaunda seGNOME haishande pasina kuwedzeredzwa, haina zvibereko, nezvimwe ..., yakafanana nekusaziva uye kusaziva, neruremekedzo rwese rwakakodzera. Kune vazhinji, vazhinji vedu vanoshandisa GNOME 3 pasina zvinowedzerwa. Ini ndinayo pasina kuwedzererwa, nekuti sekuuya kwandiri muFedora kuisa nekushanda, kuisa chero chishandiso chandinoda, macodec uye kumira kwakazara Ini handidi kumisikidza chero chinhu, ini ndinoshandura kumashure uye kuzere kumira. Ini ndiri technician masystem, uye zvechokwadi ndinoshanda nemagwaro, mabhuku, virtualizations uye console, ndizvo zvandinowanzo shandisa, uye hazvireve kushungurudzika, ndinoshanda zvakanaka navo vese. Kutama kubva kuGnome 2 kuenda kuGnome 3 kwaive kurova kune vazhinji, kusanganisira ini. Ndinoyeuka kuti ndakaedza kumupa mikana yakawanda pakutanga, kumashure mu2011, asi ichokwadi kuti huzivi hwaakaunza naye hauna kundikurudzira. Ndokusaka ndanga ndichidzokera ku KDE (iyo yandaive ndichishandisa kunyangwe kubvira 2010) asi paive nechimwe chinhu chandisina kufarira. Ini ndinoziva mabhenefiti ayo, simba rezvishandiso, asi zvinoita kwandiri (zvirokwazvo, sekutaura kunoita vamwe kutenderedza apa) kuti dambudziko ne KDE ndizvo chaizvo rinozvisiyanisa, maitiro ayo uye simba rekumisikidza. Ivo vanoiita iyo isina kusimba sisitimu, zvirokwazvo isina kusimba kupfuura yeGNOME. Nezve ndangariro yekushandisa, ingori neKonqueror yakavhurika, KDE yatoshandisa 1,2 GB. MuGnome neFirefox hafu. Ipapo KDE unozvigadzirisa zvisinei iwe zvaunoda kwechinguva, asi ichokwadi, kuti dzimwe nguva zvinoita sekunge imwe tsika "inokanganwa" iyo kana iwe watangazve muchina. Uye zvechokwadi haina chekuita nekusangana kwakakwana kwenzvimbo dzekudyidzana uye / kana maakaunzi nedesktop senge iyo iyo iyo GNOME inayo. Iri idanho rakakura redesktop ino yekupedzisira, nezve izvo zvishoma zvinotaurwa: kubatanidzwa kwakakwana kwedesktop uye network iyo Gnome inayo, uye kuti mumasekondi mashoma inoita kuti system iite otomatiki uye iwiriranise zvinyorwa, mifananidzo, kuchengetedza, maemail, kufarira , kutaurirana uye karenda nemabasa. Zvino shamisa. Chekupedzisira, pandakadzokera kuGNOME ndikatarisa mabhenefiti, shanduko dzayo dzine musoro kupfuura idzo dzakauya pakutanga kwebazi rayo, uye paradigm yayo saizvozvo, ndakagara nayo. Mumwe anoziva kuti ini ndanga ndisingade taskbar, zvinyorwa, kurerutsa kana kuwedzera, zvese zvinobatana zvakakwana uye muminiti, uye ndakaona kuti mangani masisitimu andinochengetedza nharaunda ino. Ini ndanga ndati, iwo akasiyana desktop paradigms, asi ini ndinofunga kuti maererano nezviwanikwa, parizvino, Gnome iri nani, ndinofungawo kuti yakasimba uye yakabatana, uyezve kusangana kwayinopa netsamba, makarenda, maakaundi epamhepo, kunobva ipapo zvakanakisa zvandisati ndamboona.
Ndinoona zvakanaka kuti vanhu vashandise iyi kana imwe tafura kana sevasingade kushandisa kana. Kana mumwe munhu akaishandisa, ichave nekuti vanoifarira, handifunge kuti vanhu vanoona kusvika pakushandisa chinhu chavanovenga zuva nezuva. Izvo zvakati, ikozvino ini ndakasota yangu maonero uye iwe unogona kutoti, pane kufunga kunzwa kwandinako kana ndichishandisa Gnome: Gnome inondinetsa, Gnome inogadzira kushushikana. Uye zvese nekuda kwenzira yainobata nayo windows nepaneru. Pamwe idambudziko retsinga remunhu randinaro, asi kungotarisa skrini yeGnome kunondipa hanzi mapundu uye cramp inomhanya ichikwidza nekudzika musana wangu.
Ehe, iri zvirokwazvo dambudziko rako rega. Nhanho yakanaka mukuongorora.
zvinonhuwirira! Ini ndinoda mate desktop
Pindura kuna alexishr
Ichokwadi kuti ivo vakachinja nzira yekushandisa zvakanyanya, uye mumwe munhu achangoyedza ikabondera (uye zvine simba kwazvo) neizvozvo. Asi kana ukangoishandisa kwechinguva unotanga kuifarira.
Iyo nyaya yekusave nebasa rebasa semuenzaniso. Mumba mangu ndine Gnome Shell uye windos7 kubasa, haugone kufungidzira huwandu hwenguva dzandakazviwana ndichitora mbeva nekukurumidza kuenda kukona kushandura maficha kana kuvhura chimwe chinhu, uye kutarisisa pachiratidziri ndakavhiringidzika pandakasapindurwa. Zvinonzwika sezvisinganzwisisike, asi kana wajaira, zvinotokurumidza kuwana zvinhu nenzira iyoyo. Zvakafanana nekutarisa taskbar xD
Kazhinji, izvo zvinhu zvaunonongedzera kunezvinhu zvekuravira, asi izvo zvandiri kuzobvumirana nazvo ndeye Nautilus-Dolphin theme. Nautilus haana chekuita ipapo, Dolphin inomupwanya.
Chinhu chimwe chete ichi chinoitika kwandiri. Iwe hauzive kuti inokurumidza sei uye inonzwisisika GNOME ndeye kusvikira iwe uchifanira "kubata" neimwe system kana nharaunda. Zvakare ndichishanda nemaW7s, ndakazviona nguva zhinji ndichitora pointer yegonzo kuruboshwe rwekumusoro, ndichitarisira kuona zvinhu zvangu zvakavhurwa, asi kwete, ndaifanirwa kutsvaga uye kubatisisa nebara rebasa.
Iko kudyiwa kwegondohwe kuri kuenda sei? kekupedzisira pandakashandisa gnome yaive ichimedza 1GB isina application inomhanya.
gnome-shell, kazhinji kwandiri, inoshandisa pakati pe70MB kusvika 180MB, nekushandisa kweinopfuura vhiki. Izvi, hongu, pane PC ine akati wandei GB ye RAM. Ini ndakazviongorora mune zvimwe zvakaganhurirwa uye mashandisiro ayo akatonyanya kurambidzwa (pakati pe50MB), mukuedzwa nekukurumidza.
Chinhu chinonyanya kushandisa RAM pane PC yenguva dzose ndeye web browser. Ndakaona Chrome ichitora kusvika 3GB yekushandisa. Pamwe pane chishandiso chinotangisa chakabatana pamwe ne desktop uye chiri kutora iyo yakawanda memory.
Kuverenga zvimwe zvirevo ndinowana fungidziro yekuti vamwe vanhu havana kuyedza Gnome Shell kweinopfuura hafu yeawa. Iko kuchinja kwechimbichimbi kweparadigm uye chinhu chekutanga chingave chekudzidza mashandisiro acho, kuti gare gare unosarudza imwe kana imwe imwe nyaya.
Ndakaona kuti kune vanhu vanofunga kuti kana ichinonoka zvikuru kana ikasashanda nemagwaro mazhinji akavhurika. Izvi hazvisi zvechokwadi, pamwe havasati vawana maitiro ekuzviita muGnome Shell, ndinogona kukuvimbisa kuti zvese zviri padhuze nepfupi uye kamwe kana maviri kubaya zvakanyanya (ini ndinowanzo shanda nematanhatu kana manomwe akavhurika matemu, 6 kana anopfuura maPDF, browser, tsamba yemutengi uye akasiyana zvinyorwa zvinyorwa). Ini pachangu ndinoshandisa zvinoshandira nzvimbo dzekushandira kuronga nemhando dzechirongwa uye ini ndinoshandisa zvakanyanya iyo SUPER kiyi (Windows pane akawanda ma keyboards) kufamba pakati pavo, sarudza windows kana kuvhura mapurogiramu / mafaira matsva.
Musiyano mukuru wandinoona pakati peKDE neGnome Shell maererano nedhizaini dhizaini ndeyekuti yekutanga ine maturusi ese aripo uye unogona kuadzima kana kusashandisa uye chechipiri iwe une mabhesiki ekushanda nawo uye iwe unogona kuwedzera maturusi matsva sezvavanenge vava. zvakafanira.
Zvakanaka, ini ndiri mugadziri uye ini handidi Gnome ... kwandiri mambo wekureruka achiri xfce.
Pane zvakadzama mukugadzirwa uye kuiswa kwemabhatani anoita kuti ndimhanye kubva ipapo, pamwe ndanyanyojaira Xubuntu XD
Faustino Aguilar akadaro
Akawanda matunhu edesktop uye neni pano ndichishandisa Canonical's Unity 😐
Pindura Faustino Aguilar
Mhinduro yandaigara ndichiverenga kwese kwese ndeyekuti Gnome inoitirwa mahwendefa uye kwete yedesktop ... Muchokwadi, haisi 100% yechokwadi. MuGnome ivo vari kufunga kuti desktop inotora mukana kugona kweyeye yekubata (iyo iri kuramba ichizivikanwa), kunyangwe ini ndichinzwisisa kuti ichi hachisi 100% parizvino (kutamira kuWayland hakuchina). Asi kana ichishanda zvakakwana kune laptop kana desktop uchishandisa keyboard. Pamatafura ese andakashandisa, Gnome ndiyo yakanyanya "keyboard inoshamwaridzika", iyo iri nyore kuvhura kunyorera (Super + zita rekushandisa + pinda), chinja pakati peaps, chinja desktops, pindura nekukurumidza kumeseji, nezvimwe. Ndiwo mukana wakakura unotaurwa nevanhu vashoma
edgar hdz akadaro
Kubvira pakuzvarwa ……
Pindura kuna edgar hdz
Mhoroi, chimwe chinhu chandagara ndichishandisa, hachisisiri muGNOME 3.16.
Chinhu chakareruka sekukwanisa "kubatanidza folda kana faira" kubva kuFILES !!!
Ini ndinogara ndine zvikamu zvangu:
/ data (kwandinosiya mifananidzo yangu yese, mavhidhiyo, nezvimwe)
Nekudaro, ini ndinogara ndichigadzira dhairekitori repamba kumba kwangu ku / data / Zvinyorwa (semuenzaniso).
Huye, iyo yekutanga sarudzo yaenda!
Kugadzirisa izvo zvisipo, ini ndaifanirwa kuisa imwe yangu Linux (Debian) kumba kwangu kuDebian uye "kuteedzera" zvinongedzo zvakagadzirwa kare, nenzira iyoyo zvinoshanda.
Sarudzo yekugadzira zvinongedzo zvinoramba zviripo, iwe unongofanirwa kudhonza dhairekodhi kana faira nekapakati bhatani wovakanda kwaunoda chinongedzo (s) (zvinogona kuitwa nemafaira akati wandei nemaforodha pamwechete)
ps: kana chimwe chinhu chisingakwanise kuitwa ne graphical interface panogara paine imwe nzira yekuzviita ne terminal, mune iyi kesi ne:
ln -s / data / Zvinyorwa $ HOME / Zvinyorwa /
nenzira iyi zvese zviri muFaira rako reMafaira zvichaponeswa muchikamu chedata.
Kudzikisa USB drive pasina kuvhura nautilus (mafaera) isu tinongofambisa pointer yegonzo kuzasi kwechiso (chero pazasi) kwechipiri uye bhawa rekuzivisa richaratidzwa, tinongosarudza iyo USB drive uye tinya bhatani rekuburitsa uye ndizvozvo
Mune mawonero angu ivo vari kuzadzikisa zvine huchenjeri hwavo. Uye ini ndinochida nekuti hachisi chazvino chete kana chazvino. Minimistic interfaces yakanaka asi inogona zvakare kureva kushomeka kwemutoro pane processor.
Iwe unogona kutsanangura hunhu hwako kuGnome nemazwi maviri: minimalist uye inoshanda.
Kubatika kwayo kunoenderanawo nekuwedzeredzwa iwe kwaunoda kuwedzera.
Ini handibvunze zvinopfuura izvo zvinopihwa nenzvimbo ino. Dai ndaive fan of graphic mhedzisiro kana yakanyanya kuita, Gnome yaisazove yangu enzvimbo yekufarira.
Vazhinji vakateedzera mazano kune gnome shell